Orinasa mpamatsy tany ambanin'ny tany any ambanin'ny tany fambolena sy mpamatsy | RY AGRI
Ny subsoiler andiany 3S dia mety indrindra amin'ny famoahana tany amin'ny ovy, tsaramaso, landihazo ary afaka mamaky ny tany mihamafy, mamaha ny tany ary ny mololo madio. Izy io dia manana tombony amin'ny halalin'ny halaliny, amin'ny fampiharana marobe, fampiatoana mety sns.
Ny subsoiling dia karazana haitao maharitra izay vita amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny milina ambanin'ny tany sy ny sehatry ny traktera Izy io dia fomba fambolena vaovao miaraka amin'ny angady ambanin'ny tany, angadinomby tsy misy rindrina na angadin-doha mba hamelana ny tany nefa tsy ahodina ny tany. Ny Subsoiling dia rafitra fambolena vaovao manambatra ny milina fambolena sy ny fambolena, ary iray amin'ireo teknika lehibe amin'ny fambolena fiompiana. Ny vokatry ny subsoiler 3S dia ny subsoiling eo an-toerana. Izy io dia ny fampiasana angady fady mba hamelana ny tany ary tsy hamaha ny tany amin'ny elanelam-potoana fanalefahana eo an-toerana. Ny fampiharana dia nanaporofo fa ny subsoiling interval dia tsara kokoa noho ny subsoiling feno ary be mpampiasa. Ny tena tanjona dia ny manapotika ny fanambanin'ny tany voasaina ary mitahiry rano.
Tsy misy tongotra
1. Ny fitaovana dia tsy maintsy tompon'andraikitra amin'ny fandidiana, mahazatra ny fahombiazan'ny milina, mahatakatra ny firafitry ny masinina sy ny fomba fanitsiana ary ny fampiasana ny teboka fiasan'ny tsirairay.
2.Fidio ny drafitra miasa mety. Voalohany, ny teti-dratsy dia tokony hanana faritra ampy sy ny hatevin'ny tany mety; faharoa, afaka misoroka sakana izy io; fahatelo, ny tahan'ny rano amin'ny hamandoan'ny tany dia 15-20%.
3. Alohan'ny hiasana dia tsy maintsy manamarina ny ampahany tsirairay amin'ny bolt fifandraisana, tsy tokony hanana ny loosening tranga, manamarina ny faritra tsirairay menaka, tsy tokony hanampy amin'ny fotoana; manamarina ny toetran'ny akanjo amin'ireo faritra mora simba.
4. Alohan'ny fandidiana ara-dalàna dia tokony hamolavola ny tsipika fandidiana isika, hanohy ny asa fitsapana loosening lalina, hanitsy ny halalin'ny loosening lalina, hizaha ny toetoetran'ny fiasa sy ny kalitaon'ny fiasan'ny faritra sy ny milina, ary manamboatra sy mamaha ny olana ao fotoana mandra-pahafenoany ny fepetra takiana amin'ny fandidiana.
Teo aloha: Mampihatra angadinomby ho an'ny varotra ny toeram-pambolena
Manaraka: Fambolena Rotary Tillers
Fampiroboroboana ny toeram-pambolena
Fambolena Rotary Tillers
Fambolena fampidinana an-tsokosoko